Sida Loogu Helo Xayawaanka Xoolaha Ugu Wanaagsan
Bogga ugu weynEeyaha CaafimaadkaSida Loogu Helo Xayawaanka Xoolaha Ugu Wanaagsan
1. Liis garee dhammaan rugaha caafimaadka xoolaha ee kuu dhow
2. Samee booqasho oo aad u fiirso
3. Raadi aqoonsiyo
4. Iska ilaali maaraynta xayawaanka ee adag
5. Raadso khabiir kalkaaliye caafimaad ah
Raadinta rugaha caafimaadka xoolaha ee ugu fiican ayaa aad u fudud maalmahan. Marka laga reebo xaqiiqda ah inay jiraan xarumo badan oo xayawaan ah hadda sidaa darteed u dhawaanshiyaha waligeed dhib maaha, sidoo kale waxaad si fudud uga heli kartaa Khariidadaha Google.
Si kastaba ha ahaatee, macnaheedu maaha in raadinta raadinta khabiirka xayawaanka ugu fiican sida Sugarland Vet ma keenayso in yar oo shaqo ah.
Haddii aad runtii rabto inaad hesho dhakhtarka ugu fiican ee kuugu dhow, waxaa jira tillaabooyin gaar ah oo ay tahay inaad qaado. Qaybtan, waxaanu kuugu soo bandhigi doonaa dhamaantood.
Markaa haddii aad ugaarsato rugta caafimaadka xoolaha ee xaaladaha degdegga ah ee xayawaankaaga iyo booqashooyinka caadiga ah, sii akhri dhawr talooyin iyo tabaha.
Samaynta indho-sharafeedka ayaa muhiim u ah helitaanka dhakhtarka xoolaha ee ugu fiican aaggaaga. Laakiin intaadan taas samayn, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad samayso liiska dhammaan xarumaha xayawaanka ama rugaha caafimaadka xoolaha ee kuu dhow.
AKHRI: 10 Siyaabood Oo Lagu Caawin Karo Eygaaga Inuu Miisan Yaro
Markaan nidhaahno “oo dhan”, waxaanu tixraacaynaa xarumaha aad u malaynayso inay mustaqbalka ku caawin karaan.
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay bisad xayawaan ah, uma baahnid inaad ku darto takhaatiirta daaweeya eeyada oo keliya inkastoo ay gurigaaga ka jiraan.
Mararka qaarkood, dhammaan macluumaadka aasaasiga ah ee aad u baahan tahay inaad ka ogaato adeegga caafimaadka xoolaha ayaa mar horeba lagu soo bandhigay shabakadahooda. Markaa waa inaad mid kasta oo iyaga ka mid ah dhex martaa si aad u hesho waxaad u baahan tahay.
Hoos waxaa ku yaal oo keliya qaar ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka ogaato rugta caafimaadka ka hor intaadan ballan u dhigin booqasho.
Ma jiraa daryeel degdeg ah?
Waa maxay hababka qirashada?
Xayawaankee ayuu takhtarka xoolaha ku takhasusay?
Immisa ayay dawooyinku yihiin?
Marka laga reebo fiirinta shabakadooda, waxaad sidoo kale wici kartaa khadkooda teleefoonka ama waxaad fariin ugu diri kartaa mareegaha warbaahinta bulshada si aad u hesho macluumaadka lagama maarmaanka ah.
Marka aad dhammayso liiska, waxaad hadda u gudbi kartaa tallaabada xigta.
Badi xarumaha xayawaanka ama rugaha caafimaadka aad ayay ugu faraxsan yihiin inay dalxiis ku qaataan macmiil suurtagal ah. Markaa iska hubi inaad ka faa'iidaysato fursadan. Inta lagu jiro socdaalka waxaad heli doontaa macluumaadka ugu muhiimsan oo aadan ku arki doonin shabakadooda.
AKHRI: Eeyuhu Tufaax Ma Cuni Karaan? - 10ka ugu sarreeya eeyaha miraha way cuni karaan mana cuni karaan
Waxa ugu horreeya ee la eegayo waa deegaanka oo dhan. Meeshu nadiif ma tahay? Ma diirimaad iyo nasasho ma dareemaysaa? Dhammaan dhaqdhaqaaqa rugta caafimaadka waa in uu ahaadaa mid ku habboon xayawaanka rabaayada ah si ay si fudud ugu degaan.
Hubi in qalabku jiro nadiifiyey si joogto ah. Sidoo kale, eeg haddii baqashada iyo sanduuqyada qashinka ay nadiif yihiin.
Qofna ma rabo in xayawaankooda ay cudurro ka qaadaan meel la rabo in lagu daweeyo, sax?
Inta aad hubinayso xarunta, waxa kale oo aad raadin kartaa shahaadooyin ama warqado aqoonsi oo lagu soo bandhigay xafiisyadooda. Ama waxaad si fudud u waydiin kartaa hagaha waxa ay ku xidhan yihiin iyo aqoonsigooda.
Tani waa si loo hubiyo inay yihiin adeeg sharci ah. Tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad wax badan ka barato takhasusyadooda.
Tusaale ahaan, haddii rugta caafimaadku ay xubin ka tahay Bulshada Caalamiga ah ee Daawada Feline, markaa waxay u badan tahay inay tahay meesha ugu fiican ee aad bisadkaaga u qaadan karto haddii ay jiraan xaalado degdeg ah ama booqashooyin joogto ah.
Waxa ugu dambeeya ee aad rabto inaad ku aragto xarunta xayawaanka ama rugta caafimaadka xoolaha waa maaraynta xayawaanka oo adag. Haddii aad tan aragtay intii lagu jiray socdaalka, ka saar rugta caafimaadka oo u gudub kan ku xiga.
AKHRI: Eeyuhu ma cuni karaan digaag cayriin ah? Eeyuhu ma cuni karaan lafaha digaagga cayriin? 10 Xaqiiqooyin
Maareynta qallafsan waa mid ka mid ah culeyska badan ee xayawaanka rabaayada ah. Oo ma rabto in saaxiibkaa dhogorta leh uu werwer ku qabo inta uu cudur ka soo kabanayo. Taasi waa sababta maaraynta xoolaha ay tahay inay ahaato mid jilicsan intii suurtogal ah.
Haddii aad aragto sida xun ee loola dhaqmayo xayawaanka rabaayada ah, taasi waa calan cas. Bal qiyaas waxa ay ku samayn doonaan xayawaankaaga rabaayada ah marka aanad ag joogin.
Haddii aad leedahay xayawaan weli ilmo ah, waa inaad keentaa rugta caafimaadka xoolaha ee u shaqeeya khabiir kalkaaliye caafimaad ah.
Sida magacaba ka muuqata, waa khubarada marka ay timaado daryeelka xoolaha weli ku jira marxaladda xanaanada.
Sababta ugu weyn ee aad ugu baahan tahay takhtar ku taqasusay kalkaalisada ayaa ah in xayawaanka dhallaanka aan weli loo isticmaalin hababka quudinta macmalka ah. Marka ay joogaan rug caafimaad oo ka fog hooyooyinka dhogorta leh, quudinta iyaga waxay noqon kartaa caqabad.
Halkani waa meesha uu ka yimaado khabiir kalkaaliye
Views Views: 2,257
u raadi dhakhtarka xoolaha eeygaaga
U raadi dhakhtarka xoolaha ee xayawaankaaga
article Previous3 Qodob oo Muhiim ah oo ay tahay in laga fiirsado Marka la dooranayo Dhaqtarka Ey
Next articleHaddii aad ku aragto 7-dan calamood ee xayawaankaaga, wac dhakhtarkaaga degdega ah ASAP